| Page2| Ministry of Industry
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုအား စင်္ကာပူနိုင်ငံ PWC Advisory Services Pte. Ltd နှင့် International Glass Co., Ltd. တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံ
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုအား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁၈)ရက်နေ့တွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံ PWC Advisory Services Pte. Ltd မှ Director ဖြစ်သူ Mr. Brandon LYE မှ နံနက်(ဝ၉:၃၀)နာရီတွင် လည်းကောင်း၊ International Glass Co., Ltd. မှ Managing Director ဖြစ်သူ ဦးဇော်ဝင်း ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ နံနက် (၁၀:၃၀)နာရီတွင်လည်းကောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမဆောင်တွင် သီးခြားစီလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ သင်တန်းကျောင်း၊ စက်ရုံ၊ မွေးမြူရေးဌာနတို့ကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုသည် ဇူလိုင် ၃ဝ ရက် က မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန သို့ သွားရောက်ပြီး လျှပ်စစ်စစ်ဆေး ရေး၊ ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများစစ်ဆေးရာတွင် အသုံးပြုသည့် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေး၍ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကို မှာကြားခဲ့သည်။
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုသည် ဇူလိုင် ၂၃ ရက် နံနက်ပိုင်း၌ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ရော်ဘာ ပစ္စည်းစက်ရုံခွဲ(ရန်ကုန်)သို့ ရောက်ရှိသည်။
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုအား ဂျပန်နိုင်ငံ Tsuyatomo Co., Ltd. မှ President Mr. Oguri Yoshihiro ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယမန်နေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီက စက်မှုဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ဆည် စက်မှုနယ်မြေရှိ အမှတ်(၃၆)အကြီးစားစက်ရုံ(ကျောက်ဆည်)အား ကြည့်ရှု စစ်ဆေး
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုသည် ယမန်နေ့ နေ့ လည် ပိုင်းတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ဆည် စက်မှုနယ်မြေ ရှိ အမှတ် (၃၆)အကြီး စားစက်ရုံ(ကျောက်ဆည်)သို့ ရောက်ရှိပြီး စက်ရုံရှင်းလင်းဆောင်၌ စက်ရုံမှူးက ရှင်းလင်း တင်ပြရာ